यिनै हुन् कक्षा १२ को परीक्षामा सबैभन्दा बढी अंक ल्याएर ‘नेपाल टप’ गर्ने सुम्निमा श्रेष्ठ – Dainik Sangalo
June 22, 2021 289
काठमाडौ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सोमबार कक्षा १२ को परिक्षाफल सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक गरेको कक्षा १२ को परीक्षाफलमा बुटवलकी सुम्निमा श्रेष्ठ नेपाल टप भएकी छन् । उनले जीपीए ४ अंक हासिल गर्दै नेपाल टप गरेको बताइएको छ ।मुलुकभरवाट कक्षा १२ को परिक्षामा ४ लाख ३२ हजार विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएका थिए । ति सबैलाई उछिन्दै बुटवलको न्यू होराइजन इङलिस सेकेण्डरी स्कूलमा अध्ययनरत सुम्निमा नेपाल टप भएकी हुन् ।
उक्त विद्यालयबाट विज्ञान संकायबाट ५७ जना र व्यवस्थापन संकायबाट ३३ जनाले परीक्षा दिएकामा २३ जनाले ए प्लस ग्रेड हासिल गरेका छन् ।विज्ञान संकायबाट सक्षम देवकोटा र अमृत अर्यालले ३।९२ जीपीए र व्यवस्थापन संकायकी दिब्या उपाध्यायले ३।८४ जीपीए हासिल गरेका खनालले बताए ।
Prevतपाईंको जस्तै सोच सबैको भयो भने जातीय विभेदको अन्त्य हैन, जातीय लडाइँ सुरु हुन्छ रुपाजी !
Nextबादलमाथि फेरि मडारियो कालो बादल? सपथ खाएको १५ दिन नपुग्दै श्रीमतिको मन्त्री पद पनि खुस्कियो
विद्यार्थीको हात भा’च्ने शिक्षिकालाई पाँच हजार जरिमाना र १५ दिन कै’द